गगन थापा एमालेका राजन भट्टराईसँग यसकारण पराजित हुँदैछन् • Janaboli
गगन थापा एमालेका राजन भट्टराईसँग यसकारण पराजित हुँदैछन्
राजन भट्टराई कुटनैतिक विषयका विज्ञ हुन् । उनी एमाले भित्रकै परराष्ट्र मामलामा उत्कृष्ट जानकार नेताको रुपमा चिनिन्छन् । उनको टक्कर नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापांसँग हुँदैछ । कसको चुनावी पल्ला भारी छ । आजको यो अन्र्तवार्ताले तपाई पाठकलाई प्रष्ट पार्नेछ ।
तपाईंकै एक उपल्लो तहको नेताले चुनावी खर्चका कारण उम्मेदवार हुन सकिन भन्नुभयो । चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको हो ?
चुनाव खर्चिलो भएको छ । चुनावको प्रणालीका बारेका हामीले राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्छ । हामीले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई बहसमा नल्याउने हो भने भविष्यमा चुनावी खर्चले समस्याले ल्याउँछ ।
तपाईंको दैनिक खर्च पनि बढिरहेको छ । प्रचार प्रसारका लागि खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
खर्चको समस्या त परेको छ । यद्यपि हाम्रो स्थानीय तहबाट नै जुटाउने काम भएको छ । मैले पैसा दिनुपरेको छैन । स्वभाविक रूपमा पार्टी सदस्यहरूसँग सहयोग जुटाइरहेका छौँ । पेसा व्यवसायमा लागेकाले निश्चित रकम दिनुपर्ने र दलको सामान्य समर्थकले केही सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यद्यपि उठेको भने छैन ।
जोडतोडले चुनावी प्रचारमा खटिरहनुभएको छ । तपाईंको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
राम्रो पाएको छु । जनताको मप्रतिको, हाम्रो पार्टीप्रतिको वा पार्टीको कार्यक्रमप्रतिको समर्थन धेरै राम्रो छ । यो ४ नम्बर क्षेत्रमा वामप्रतिको समर्थन धेरै राम्रो छ ।
तपाईं स्थानीय मतको आधारमा अलि बढी उत्साहित हुनुभएको हो ?
वामपन्थीको यहाँ बाहुल्य मत हो । आम जनताको राष्ट्रिय मुद्दाको मार्किङ गरेको छु । वैशाखमा हाम्रो अवस्था फर्काएका छौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिने हो । स्थानीय मतको आधार र अहिलेको घरदैलोको आँकलन गरेर भनेको हुँ । आम मतदाता, तटस्थ मतदाता तथा राजनीतिक दलहरूबाट राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु । मेरो आपm्नो पार्टीका तल्लो इकाइहरू र पत्रकार साथीहरूबाट पाएको प्रतिक्रियाका आधारमा भनेको हुँ ।
घरदैलोमा आम मतदाताको गुनासो तथा समस्या के पाउनुभयो ?
– घरदैलोमा धेरै समस्या त बुझ्न सकिन्न । अन्तक्रिया गरेर बुझ्ने समय हुँदैन । छोटकरीमा मात्रै कुरा हुने हो । हामी वडाका टोल टोलमा पुगेका छौं । क्लस्टर अनुसार भेला गरेका छौं । त्यहाँका समस्या छलफल गरेका छौं । जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयका प्रत्येक समस्या परिचित हुनुहुन्छ । पहिलो पानी, दोस्रो बाटोघाटो, तेस्रो यहाँको ट्राफिक जाम, चौथो यहाँको धुलो र पाचौँ सर्वसाधारणले बाटो क्रस गर्न नसक्ने अवस्था छ । यिनै यहाँका प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू हुन् ।
गगन थापाले कुनै अवस्थामा चुकेको पनि छु, जसले गर्दा सोंचेअनुसार गर्न सकिन भनी स्विकारोक्ति छ । तपाईंले अघि बोल्ने क्रममा बाटोको समस्या तीन महिनामा अन्त्य गर्छु भन्नु भयो । सम्भव छ ?
– हामीहरू लागि पर्यौ भने त्यो सम्भव छ । हामीले जनतामा गएर मत माग्दा दिएका वचन न्यूनतम त पालना गर्न पर्र्यो । एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा पाउनुपर्यो । खानेपानी कुरा गरौँ । तपाईंले कति प्रयत्न गर्नुभयो जनताले हेर्ने त्यो हो । हरेक वर्ष कपन बाटोका कारण नाकाबन्दि भयो भन्ने सुनिन्छ । अनि हरेक वर्ष कपनको एउटा पनि बाटो नबन्ने हुन्छ रुमैले जनतासंग भनेको छु ।पाँच वर्षसम्म पनि जनताका समस्या उस्तै रहे भने म पुनः भोट माग्न आउँदिन ।
तपाईंका प्रतिस्पर्धी पनि युवा पुस्ताका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
–वामपन्थीहरूले साझा उम्मेदवार र साझा नीति बनाएर हिँडेका छौं । नेपाली काङ्ग्रेस केही पार्टीहरूसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ । विगतमा निर्वाचन जितेका उम्मेदवारहरू पछि हारेका पनि छन् । सामान्य पृष्ठभूमिका उम्मेदवारले जितेका छन् । त्यो के हो त भन्दा विगतमा सङ्गठन र जनतामा कति गएका छन् भनी हेर्नुपर्छ । व्यक्तिको भूमिका प्रधान हुँदैन । गौढ हुन्छ । तर हुुँदै हुँदैन चाहिँ म भन्दिनँ ।
तपाईंले जित्नुभयो भने जनताका पक्षमा गर्ने कार्यहरू के–के हुन् ?
–एउटा त राष्ट्रिय राजनितीक मुद्दामा केन्द्रित हुने भइहाल्यो । संविधान कार्यान्वयनमा, आर्थिक वृद्धि, समृद्धिको मुद्दा, राष्ट्रियताका मुद्दा तथा स्वाधीनताका पक्षमा उहाँहरूको प्रतिनिधि पछि परेको हुनेछैन । स्थानीय तहमा यहाँ देखिरहेको भयावह अवस्था छ । विशेषगरी खानेपानी, बाटो, ट्राफिलगायतका समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछु । जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसका पनि प्राथमिकता निक्र्यौल गर्नेछौं । स्थानीय स्रोत साधनले भ्याउने काम स्थानीय स्रोत साधनले र स्थानीय स्रोतले नभ्याउनेलाई केन्द्रीय बजेट छुट्याएर तदरुकताका साथ काम गर्नेछौं ।